mots (my) - Traduire SPIP
Traduction du module "mots" de fr vers my
info_delet_mots_cles Vous avez demandé à supprimer le mot-clé <b>@titre_mot@</b> (@type_mot@). Ce mot-clé étant lié à <b>@texte_lie@</b> vous devez confirmer cette décision : သော့ချက်စကားလုံး ဖျက်ရန်လိုအပ်ပါသည်<b>@titre_mot@</b> (@type_mot@) ဤသော့ချက်စကားလုံးသည်
<b>@texte_lie@</b>သို့ ချိတ်ဆက်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ပြုပါ 2013-09-23 20:54:45 Modifié Modifier
info_selection_un_seul_mot_cle On ne peut sélectionner qu’<b>un seul</b> mot-clé à la fois dans ce groupe. ဤအုပ်စုမှ တစ်ကြိမ်လျှင်<b>သော့ချက်စကားလုံးတစ်လုံးကိုသာ</b> သင်ရွေးချယ်ခွင့်ရသည် 2013-09-23 20:54:46 Modifié Modifier
texte_config_groupe_mots_cles Souhaitez-vous activer la configuration avancée des mots-clés, en indiquant par exemple qu’on peut sélectionner un mot unique par groupe, qu’un groupe est important… ? အရေးပါသော အုပ်စုတစုမှ သီးသန့်စကားစုတစုကို ​​ရွေးချယ်နိုင်ရန် သော့ချက်စကားလုံးများ အဆင့်မြှင့် စီမံလုပ်ဆောင်မှုကို အသက်သွင်းလိုပါသလား? 2013-09-23 20:54:47 Modifié Modifier
creer_et_associer_un_mot Créer et associer un mot-clé Créér et associer un mot-clé 2013-10-03 23:19:04 Nouveau Modifier
avis_conseil_selection_mot_cle <b>Groupe important :</b> il est fortement conseillé de sélectionner un mot-clé dans ce groupe. <b>အရေးကြီးသောအုပ်စု</b> အစုထဲမှ သော့ချက်စကားလုံးများကို ရွေးချယ်ရန် လေးလေးနက်နက် အကြံပြုချက်ဖြစ်သည် 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_administrateurs les administrateurs du site ဝက်ဘ်ဆိုက်ကြီးကြပ်သူ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_redacteurs les rédacteurs စာတည်းများ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
bouton_checkbox_qui_attribue_mot_cle_visiteurs les visiteurs du site public lorsqu’ils postent un message dans un forum. ဖိုရမ်တွင် မှာကြားချက်များထားရှိပြီး အများသုံးဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူများ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
icone_creation_groupe_mots Créer un nouveau groupe de mots သော့ချက်စကားလုံး အုပ်စုအသစ်တည်ဆောက်ပါ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
icone_creation_mots_cles Créer un nouveau mot-clé သော့ချက်စကားလုံး အသစ်တည်ဆောက်ပါ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
icone_modif_groupe_mots Modifier ce groupe de mots ဤသော့ချက် စကားလုံးအုပ်စုကို ပြန်လည်မွမ်းမံပါ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
icone_mots_cles Mots-clés စကားစုများ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
icone_supprimer_groupe_mots Supprimer ce groupe ဤအုပ်စုကို ဖျက်ပစ်ပါ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
icone_voir_tous_mots_cles Voir tous les mots-clés သော့ချက်စကားလုံးများကို ပြပါ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
info_articles_lies_mot Les articles liés à ce mot-clé ဆောင်းပါးများကို ဤသော့ချက်စကားလုံးများနှင့် ပေါင်းစည်းပါ 2013-09-23 20:54:44 Traduit Modifier
info_changer_nom_groupe Changer le nom de ce groupe : ဤ​အုပ်စုအမည်ကို ပြောင်းပါ 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_creation_mots_cles Créez et configurez ici les mots-clés du site နေရာတွင် ဝက်ဘ်ဆိုက် သော့ချက်စကားလုံးများ တည်ဆောက်ရန်နှင့်ညှိရန် 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_dans_groupe Dans le groupe : အုပ်စုထဲတွင် 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_groupe_important Groupe important အရေးပါသောအုပ်စု 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_mots_cles Les mots-clés သော့ချက်စကားလုံးများ 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_mots_cles_association Les mots-clés de ce groupe peuvent être associés : ဤအုပ်စုရှိ သော့ချက်စကားလုံးများသည် ()နှင့် ပေါင်းစည်းနိုင်သည် 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_oui_suppression_mot_cle je veux supprimer définitivement ce mot-clé. သည်သော့ချက်စကားလုံးများကို အမြဲတမ်းဖျက်ပစ်ချင်သည် 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_question_mots_cles Souhaitez-vous utiliser les mots-clés sur votre site ? သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် သော့ချက်စကားလုံးများကို အသုံးပြုချင်ပါသလား 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_qui_attribue_mot_cle Les mots de ce groupe peuvent être attribués par : ဤအုပ်စုရှိ သော့ချက်စကားလုံးများကို ()ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ပါသည် 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_retirer_mot Retirer ce mot ဤစကားစုများကို ပယ်ဖျက်ရန် 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_retirer_mots Retirer tous les mots ဤစကားစုများအားလုံးကို ပယ်ဖျက်ရန် 2013-09-23 20:54:45 Traduit Modifier
info_rubriques_liees_mot Les rubriques liées à ce mot-clé အပိုင်းကဏ္ဍသည် ဤသော့ချက်စကားနှင့် သင့်လျော်သည် 2013-09-23 20:54:46 Traduit Modifier
info_supprimer_mot supprimer ce mot ဤသော့ချက်စကားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပါ 2013-09-23 20:54:46 Traduit Modifier
info_titre_mot_cle Nom ou titre du mot-clé ဤ သော့ချက်စကားလုံး၏ အမည် (သို့)​ ခေါင်းစဉ် 2013-09-23 20:54:46 Traduit Modifier
info_un_mot Un seul mot à la fois တကြိမ်တွင်သုံးသော သော့ချက်စကားလုံးတခု 2013-09-23 20:54:46 Traduit Modifier
item_ajout_mots_cles Autoriser l’ajout de mots-clés aux forums ဖိုရမ်များတွင် သော့ချက်စကားလုံးများ ထပ်ပေါင်းခြင်းကို ခွင့်ပြုသည် 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
item_non_ajout_mots_cles Interdire l’utilisation des mots-clés dans les forums ဖိုရမ်များထဲသို့ သော့ချက်စကားလုံးများ ထပ်ထည့်ခွင့်မပြုပါ 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
item_non_utiliser_config_groupe_mots_cles Ne pas utiliser la configuration avancée des groupes de mots-clés အဆင့်မြင့် သော့ချက်စကားလုံးများ ဆက်သွယ်တပ်ဆင်မှုကို မသုံးပါနှင့် 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
item_non_utiliser_mots_cles Ne pas utiliser les mots-clés သော့ချက်စကားစုများကို မသုံးပါနှင့် 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
item_utiliser_config_groupe_mots_cles Utiliser la configuration avancée des groupes de mots-clés အဆင့်မြင့် သော့ချက်စကားလုံး ဆက်သွယ်တပ်ဆင်မှုကိုသုံးပါ 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
item_utiliser_mots_cles Utiliser les mots-clés သော့ချက်စကားစုများကိုသုံးပါ 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
logo_mot_cle LOGO DU MOT-CLÉ သော့ချက်စကားလုံးများ၏လိုဂို 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
pour personnaliser la présentation des articles dans vos squelettes. သော့ချက်စကားစုများသည် ဆောင်းပါးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍများ၏ ခေါင်းစဉ်အလိုက် ချိတ်ဆက်မှု လိပ်စာများကို ဖန်တီးခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသည် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ပိုမိုအသက်ဝင်အောင် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကိုလည်း ​ရရှိစေပါသည်။ 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
texte_mots_cles_dans_forum Souhaitez-vous permettre l’utilisation de mots-clés sélectionnables par les visiteurs dans les forums du site public ? (Attention : cette option est relativement complexe à utiliser correctement.) လူထုဝက်ဘ်ဆိုက်ဖိုရမ်အတွင်း အလည်လာရောက်သူများမှ ရွေးချယ်နိုင်သော စကားစုကို သင်ခွင့်ပြုလိုသလား
(သတိပေးချက်- ဤရွေးချယ်ရန် အခွင့်လမ်းကို မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အခက်ခဲ အနည်းငယ်ရှိပါသည်) 2013-09-23 20:54:47 Traduit Modifier
texte_nouveau_mot Nouveau mot သော့ချက်စကားလုံး​အသစ် 2013-09-23 20:54:48 Traduit Modifier
titre_config_groupe_mots_cles Configuration des groupes de mots-clés သော့ချက်စကားလုံးအုပ်စုများ ဆက်သွယ်တပ်ဆင်မှု 2013-09-23 20:54:48 Traduit Modifier
titre_gauche_mots_edit MOT NUMÉRO : သော့ချက်စကားလုံးနံပါတ် 2013-09-23 20:54:48 Traduit Modifier
titre_mots_cles_dans_forum Mots-clés dans les forums du site public အများသုံး ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖိုရမ်ထဲရှိ သော့ချက်စကားလုံးများ 2013-09-23 20:54:48 Traduit Modifier
titre_mots_tous Les mots-clés သော့ချက်စကားလုံးများ 2013-09-23 20:54:49 Traduit Modifier
titre_nouveau_groupe Nouveau groupe အုပ်စုအသစ် 2013-09-23 20:54:49 Traduit Modifier
titre_page_mots_tous Mots-clés သော့ချက်စကားလုံးများ 2013-09-23 20:54:49 Traduit Modifier